အင်္ဂလိပ်စကားပြောတက်ချင်တယ်၊ပြောတက်ချင်တယ်ဆိုပြီး အိမ်မက်ထဲမှာပဲ ယောင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို သူငယ်ချင်းများအတွက် - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စကားပြောတက်ချင်တယ်၊ပြောတက်ချင်တယ်ဆိုပြီး အိမ်မက်ထဲမှာပဲ ယောင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို သူငယ်ချင်းများအတွက်
Posted by minminsoeadb on December 22, 2011 at 23:21 in ကြေငြာချက်၊ အကြံပြုချက် နှင့် အကူအညီတောင်းခံခြင်း (Announcement, Comments & Help)
သင်တန်းတွေအများကြီးတက်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတက်ဘူးလို့ တော်တော်များများပြောကြပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။မတက်ပါဘူး။သင်တန်းတက်ရုံနဲ့ ဘယ်တော့မှ မတက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာ သိသလောက်ပြောပါရစေ။
အင်္ဂလိပ်စာမှာ input နဲ့ outputဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းက သင်လာခဲ့တဲ့ သဒ္ဒါတွေ၊ဝေါဟာရတွေ၊ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံတွေ စသည်ဖြင့် အားလုံးပာာ inputတွေပါ။
အဲဒါတွေကို ပြန်အသုံးချတာကို outputလို့ခေါ်ပါတယ်။outputထုတ်အောင်၊သို့မဟုတ်ပြန်သုံးနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဖြေရလွယ်ပြီး လုပ်ရခက်တဲ့ မေးခွန်းပါ။
နေ့စဉ်အသုံးချရပါမယ်။အရှက်အကြောက်မရှိဘဲ တွေ့သမျှစကားအားလုံးကို ဘာသာပြန်ကြည့်ရပါ့မယ်။ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများငယ်စဉ်မှာ သင်ခဲ့ရတာက မြန်မာလိုတွေး၊အင်္ဂလိပ်လိုရေး လို့သင်ခဲ့ရတာကြောင့် အများစုက ဗမာလိုတွေး၊အင်္ဂလိပ်လိုရေးတက်ပါတယ်။အဲဒီမှာတင်
သေပန်းပွင့်-die flower open
လွမ်းရက်ရှည်ရှည်အင်းလျားမြေ-miss day long long inya ground
လေးလေးနက်နက်ပြောရရင်--heavy heavy black and black
အရိပ်သုံးပါးနားမလည်--three shadow no understand
တို့ကဲ့သို့ လူပြတ်တွေ ပြောတဲ့ ဟာသတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗမိာလိုတွေး၊အင်္ဂလ်ိပ်လိုရေးလို့ မရပါဘူး။အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ အခြေခံဝါကျဖွဲ့စည်းပုံက subject verb object
မြန်မာစာက ပြုလုပ်သူ၊ခံရသူ၊တြိယာ မို့လို့ ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံခြင်းမတူသလို စဉ်းစားပုံခြင်းမတူပါဘူး။
ခေတ်ကြီးက အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ခေတ်ပါ။ငွေလေးရာရှိရင် အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကား(၄)ကားပါတဲ့ အခွေဝယ်လို့ရပါပြီ။အဲဒီခွေကို မြန်မာစာတမ်းမထိုးပဲ ပညာရှာတဲ့အနေနဲ့ ကြည့်လိုက်ပါ။ဆိုလိုတာက ဇာတ်ကား အရသာ မခံဘဲ အဘိဓာန်တအုပ်ဘေးချပြီး မသိတဲ့စာလုံးပါရင် လိုက်ရှာ၊ဘာသာပြန်၊အသံထွက်ကြည့်။ပြီးမှ ဆက်ကြည့်။အဲဒီလိုကြည့်ရင် ဇာတ်ကားတကားကို ၁၀နာရီလောက်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တဲ့သူများက ခုမှ စလေ့လာတဲ့ အခြေခံနဲတဲ့လူတွေကို ပြောတာပါ။နဲနဲပါးပါး သိတဲ့လူများကို မရည်ရွယ်ပါဘူး။အဲဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် တလလောက်နေရင် နဲနဲဘာသာပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကျမှ နောက်တဆင့်တက်ပါ။အဲဒါကတော့ ကိုယ်နဲ့တွေ့တိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောမဲ့ သူငယ်ချင်းရှာပါ။ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ မန္တလေးမြို့ကျောင်းသားတွေထဲမှာ( ဆေးကျောင်း၊စက်မှု၊ကွန်ပျူတာ၊ရတနာပုံ၊မိန်းတက္ကသိုလ် အကုန်ပါပါတယ်။)အင်္ဂလိပ်စကားပြောမလား။မြွေကိုက်ခံမလားဆိုရင် မြွေကိုက်ခံမယ့်လူ ပဲ များပါတယ်။အများစုက အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပေမဲ့ လူကြားထဲမှာ ပြောဖို့ သေမလောက်ဝန်လေးပါတယ်။ဒါကြောင့် တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲရှာရပါလိမ့်မယ်။တွေ့ရင် သူနဲ့ညှိလိုက်ပါ။အမြဲတမ်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့၊မပြောနိုင်ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့စသည်ဖြင့်ပေါ့။တွေ့တိုင်းပြောနေမယ်ဆိုရင် သုံးလလောက်နေရင် တိုးတက်လာတာ သိသာပါတယ်။နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေကိုတော့ နောက်တပ်ိုင်းမှ ပြောပါရစေတော့။မန္တလေးသားဆိုတော့ စကားပြောတာ နဲနဲ ရိုင်းသလိုဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။အကျင့်ပါနေလို့ပါခင်ဗျ။
Permalink Reply by thwe thwe phyo on April 10, 2012 at 11:45
Permalink Reply by Master Learner on April 10, 2012 at 11:57
Good! Good Advice!
Permalink Reply by myokoko on April 10, 2012 at 14:38
Permalink Reply by Master Learner on April 27, 2012 at 22:12
Permalink Reply by Master Learner on April 27, 2012 at 22:13
Permalink Reply by ကျော်ကျော်ခိုင် on October 22, 2012 at 22:35
ဟုတ်ပါတယ်...ကျနော် တောင်မှ အားအားယားယား အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အင်္ဂလိပ်လိုလေ့ကျင့်ရင် အိမ်ကလူတွေကတော့ ရူးနေတယ်လို့
Permalink Reply by Ei Phyu Myint on March 13, 2013 at 22:14
thanks, friend. that's true.
Permalink Reply by Gyit on May 29, 2013 at 7:54
( စကားပြောတာ နဲနဲ ရိုင်းသလိုဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။အကျင့်ပါနေလို့ပါခင်ဗျ )Never mind,Bro.... I know how's yur good-will on all,bro MMS...Thanksalot for yur nice advice :D
Permalink Reply by minminsoeadb on May 30, 2013 at 17:35
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 16, 2015 at 5:16